arunsubedi: July 2015
राष्ट्र बैंक र सरकार नै जग्गा दलालको पक्षमा उभियो
२०७२ असार २७ गते १२:३० मा प्रकाशित
यस्तो देखिँदैछ कि अब काठमाडौ अझ अनियन्त्रित किसिमले फैलनेछ । टुक्रा जग्गाको मूल्य आकाशिने छ । जग्गाको प्लटिङ व्यवसाय उपद्रो फस्टाउने छ । जग्गा दलाल र भूमाफियाका लागि नयाँ नेपाल निर्माण हुनेछ ।
भूकम्पपछिको आर्थिक नीतिउपर लेखिरहँदा मस्यौदा संविधानले केही अंक बराल्यो । नेपाललाई नै युगौं बराल्नेखालको मस्यौदामाथि स्वप्नकार चुप रहन सकेन र आफ्नो ब्रम्हले देखेको राष्ट्रप्रतिको दायित्व पूरा गर्नै पर्‍यो । यसैबीच अर्को प्रशंग आएको छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ।
स्वप्नकारले लेखेका र लेख्ने विषयहरु नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने विषय नै हुन्, तर भएन र हुँदैनन् । जे कुरा उठान भए पनि त्यो एउटा सचेत नागरिकले देखेको कुरा लेख्ने बाहेक केही भएन । लेखिरहनु निस्पृय कर्म मात्र भएको छ ।
फेरि भूमाफिया फस्टाउने संकेत
शहरी आवास तथा भूपयोग नीति भूकम्पको विनासपछिको नव/पुननिर्माणको बहस भइरहँदा केही अनौठा प्रचारहरु आएका छन् । यसले मुलुकको भूउपयोग अवस्था र आवास नीतिमा दुरगामी नकरात्मक असर पर्नेछ ।
अग्ला पक्की घरहरु र अर्पाटमेन्टका बिरुद्ध अत्यन्त नकारात्मक प्रचारहरु आइरहेका छन् । यसमा सञ्चार माध्यमका बिश्लेषणहरु पनि त्यसै प्रकारले संप्रेसित छन् र सरकारका नीतिहरु पनि केही हदसम्म त्यसै प्रचारको प्रभावमा बग्न थालेको प्रतीत हुन्छ । अहिलेको ट्रेन्ड बिचार गर्दा अब काठमाडौ अझ अनियन्त्रित किसिमले फैलने छ । टुक्रा जग्गाको मूल्य आकाशिने छ । जग्गाको प्लटिङ व्यवसाय उपद्रो फस्टाउने छ । जग्गा दलाल र भूमाफियाका लागि नयाँ नेपाल निर्माण हुनेछ ।
मध्यम वित्तीय परिवारका लागि घर प्रायः असम्भव सपना बन्ने छ । सरकारलाई राजस्व खुब आउनेछ, जसका कारण यस्तो स्थितिप्रति सरकारको भद्र सहमति देखिन्छ ।
नक्सा पास र पास भएका नक्शाबाट बन्ने घरका सुपरीवेक्षण नगर्ने तर, बनाउन प्रतिबन्ध लगाउने, कित्ताकाट गरेर गग्गा बेच्न चाँहि छुट दिने, नगर बिकासको कुनै सहमति लिनु नपर्ने । यसमा भूउपयोग नीति को कुनै सरोकार नहुने ।
यस्ता तमाम लक्षणहरु छन्, जसले प्रमाणित गर्छ कि सरकार र राष्ट्र बैक जग्गा दलाल र माफियाकरण मार्फत जग्गाको कारोवार बढाउने पक्षमा छ ।
सरकार र राष्ट्र बैंक जग्गा दलाल र माफियाकरण मार्फत जग्गाको कारोवार बढाउने पक्षमा छ
अहिलेको सरकारी रवैयालाई विश्लेषण गर्ने हो भने सरकार दुईवटा निर्णयमा पुगेको स्पष्ट हुन्छ । पहिलो-राजस्वका स्रोतहरुबाट अपेक्षित राजस्व नउठेपछि राजस्व बढाउने भरपद्रो उपायका रुपमा जग्गाको खरिद-बिक्रीलाई प्रोत्साहन गर्ने । र, दोस्रो- तुरुन्त विदेशी लगानी पनि नआउने र पर्यटन उद्योगको कारोवार खुम्चिएको अवस्था आएबाट बिदेशी मुद्रामा आउने न्यूनतालाई आधार बनाएर नेपाली मुद्राको अवमूल्यन गर्ने ।
यी दुबै कुराका लागि नीतिगत पूर्वाधार मात्र नभएर योजनावद्ध प्रचार-प्रसार पनि सुरु भइसकेको छ । यो कुरा स्वप्नकारले बारम्वार भनी आएको छ । यी दुवै कुरा आत्मघाती हुनेछन् । यस स्थितिबाट मुलुकलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भनी पहिले नै चर्चा भइसकेको छ । यसर्थ यस श्रृंखलामा शहरी आवास तथा भूउपयोग नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चर्चा गर्ने कोशिस गरिएको छ ।
काठमाण्डौ तथा अन्य प्रभावित शहरी क्षेत्रमा भूउपयोग नीति कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ, जसले आवासका लागि उपलब्ध जमीन झन् घट्न जानेछ ।
जमीनको हदबन्दी घडेरी अर्थात अनुत्पादक क्षेत्रमा लागु गर्नुपर्दछ । आवाशीय प्रयोजनका लागि एक व्यक्तिले कतिवटासम्म, कस्ता-कस्ता घर घडेरी राख्न पाउने भन्ने मापदण्ड तयार हुनु पर्दछ । स्वप्नकारको यो पुरानो अडान हो कि व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भए पनि नगर विकास प्राधिकरणको अनुमतिविना बिक्री र कित्ताकाट गर्न नपाउने नीति लागु गर्न ढीला भइसक्यो ।
अहिले नेपालीमा ठूलाघर र अपार्टमेन्टमाथिको विश्वास तुरुन्त फर्किन सक्ने अवस्था छैन । एपार्टमेन्ट व्यवसाय धरापमा परेर जग्गाको प्लटिङ बढ्न थाल्यो भने त्यो अर्काे विडम्बना हुन जानेछ
भूकम्पपछि सर्वाधिक जोखिममा परेको व्यवसाय बन्न पुगेको छ संयुक्त आवास । पहिलेका मापदण्डहरु र अनुगमन उपयुक्त भएन भन्ने कुरा अहिलेको अवस्थाले प्रमाणित गरिसकेको छ । तर, त्यसको अर्थ ठूला घरहरु र अर्पाटमेन्ट बनाउनुनै हुँदैन भन्ने जुन आम प्रचार आइरहेको छ, त्यो पनि सर्वथा अनुचित छ ।
निर्माण मापदण्ड र इञ्जिनियरिङ तथा निर्माण सामाग्रीको प्रकार र गुणस्तरमा गम्भिर बहस हुन सक्छ । त्यसमा उपयुक्त विकल्पहरु खोजिन आवश्यक पनि छ र त्यस्ता विकल्पहरु येथेस्ट छन् पनि । रातो ईटा प्रधान बोझिलो निर्माण संस्कारलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । तर, सघन एवं व्यवस्थित संयुक्त र सामुहिक आवास भने आजका लागि मात्र हैन, भविश्यका पिँढीसमेतलाई जोगाउन र आवश्यक भूमि उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।
कानुनी र प्राविधिक मापदण्डहरु जे जस्ता तोकिए पनि अहिले नेपाली जनतामा ठूलाघर र अपार्टमेन्टमाथिको विश्वास तुरुन्त फर्किन सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि सरकारले प्रोत्साहन कार्यक्रमहरु अगाडि ल्याउन जरुरी छ ।
अपार्टमेन्ट व्यवसाय धरापमा परेर जग्गाको प्लटिङ बढ्न थाल्यो भने त्यो अर्काे विडम्बना हुन जानेछ । प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिलो कार्य हो, कानुनी र प्राविधिक मापदण्डलाइ विश्वस्नियताका साथ बनाइनु र कार्यान्यवन गर्नु । यस्ता प्रयत्नले आन्तरिक जनसंख्यामा विश्वास जगाउन लामो समय लाग्ने र त्यस्तो समय पर्खंदा ठूलो पुँजी जोखिममा पर्न जाने स्पष्ट छ । पहिलेदेखि धर्मराएको व्यवसायलाई त्यस्तो अवस्थामा जान नदिनु सरकारको दायित्व हो ।
यसकारण हाउजिङ र अर्पाटमेन्ट व्यवसायलाई पुर्नजीवन दिन कुनै थ्रेसहोल्ड विना विदेशीहरुले नेपालमा एपार्टमेन्ट र घर किन्न सक्ने कानुन बनाउन अपरिहार्य भएको ठहर छ स्वप्नकारको ।
बाबुराम भट्टराईका पालामा थ्रेसहोल्ड सहितको नीति आए पनि कानुन बन्न सकेको छैन । यदि यस्तो नीति र कानुन बनेमा विदेशी पुँजी त आउछ नै, त्यसले ठूलो पुजीँलाई जोखिमबाट पनि बचाउँछ । राजस्व पनि राम्रै प्राप्त हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई पनि ठूलै जोखिमबाट मुक्ति मिल्नेछ । सरकारले कर्मचारी आवास तथा अन्य प्रयोजनका लागि पनि अर्पाटमेन्टहरु खरिद गरी उपयोग गर्ने प्रवर्धनात्मक नीति ल्याउन जरुरी भइसकेको छ ।
यसप्रकार धरापमा परेका संयुक्त आवास परियोजनाहरुलाई उकास्न सकिन्छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/07/298629/#sthash.bDvd0py6.dpuf
Posted by arun subedi at 6:53 PM No comments:
Posted by arun subedi at 6:50 PM No comments:
संविधानको मस्यौदा : मृत्युपत्रमा कांग्रेसको हस्ताक्षर - See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/07/295027/#sthash.zZrDIzWp.dpuf
संविधानको मस्यौदा : मृत्युपत्रमा कांग्रेसको हस्ताक्षर
कस्तो समाजवाद ल्याउने उत्तर कोरियाको जस्तो ?
२०७२ असार १७ गते १०:०८ मा प्रकाशित
अहिले संविधान मस्यौदाको चर्चा छ । भूकम्पपछिको नवनिर्माण कि पुनर्निर्माण भन्ने बहस चलिरहेको बखत संविधान पनि नव र पुनको बीचको जस्तो भएर मस्यौदा पेश भएको छ ।
सधैंजसो आर्धिक मुद्दामा आफुलाई केन्दि्रत गर्ने स्वप्नकार आज भने संवैधानिक मुद्दामा बढी केन्द्रित रहने अवस्था आयो । मस्यौदा संविधानमा केही सांस्कृतिक, केही राजनीतिक र केही आर्थिक पहलका सकारात्मक/नकारात्मक एवं अनुत्तरित प्रश्नमाथि विश्लेषण गर्ने चेष्टा छ यो स्वप्नकारको ।
लामो स्वभाविक गर्भकालबाट अस्वभाविक र छोटो प्रसवकालमा आएको मस्यौदा संविधानका स्वरुप र त्यसवारे आफ्नो अडान राख्दै आएका राजनीतिक दलहरुको स्थिति हेर्दा यो आश्चर्यको बिषय पनि भएको छ । आखिर यस्तो हतारो किन गरियो संबिधानका लागि विश्लेषणको विषय बनेको छ ।
यो कारण एउटा मात्र हो, धर्म निरपेक्षताका लागि पश्चिमा दबाव । सांस्कृतिक राष्ट्रियतालाई अश्विकार गरेको यो मस्यौदा संविधानले नेपालको बिखण्डनको बिजारोपण गरेको छ । राष्ट्रको मूलधार सांस्कृतिक पहिचानको अवज्ञा तथा त्यस अन्र्तगत रहेका अरु सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा तयार पार्नुपर्ने संघीय ज्यामितिबाट विमुख रहेको संविधान लागु गरिएकै दिन जल्ने निश्चित छ ।
वर्तमान संविधानमा प्रचण्ड बहुमत भए पनि यसले ‘वाइभर’ संविधानको रुप ग्रहण गर्न सक्ने सम्भावना प्रवल रहेको छ । आफुले राखेको कुरा प्रमाणित नभए पनि ठूलो मात्रामा पश्चिमा धनराशीले खरिद गरिएको मस्यौदा संविधान त हैन ? यो भन्ने आशंका पनि यत्तिकै उत्पन्न भएको छ ।
बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रलाई अपरिवर्तनीय सर्त राख्न सकेन नेपाली कांग्रेसले । यो भन्दा ठूलो पतन केही हुने छैन कांगे्रसको । अब नेपाललाई उत्तर कोरियाजस्तो प्रजातान्तिक जनगणतन्त्र नेपाल बनाउने कार्यलाई संविधानको प्रस्तावनाले चाँहि छुट दिएको छ । त्यसमा ‘समाजवादी’ पनि थप्न सकिनेछ ।
यो मस्यौदा संविधानसँगै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो मृत्युपत्रका रुपमा यो मस्यौदा संविधानमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
सापेक्षित रुपमा लामो र मर्मको ओजमा उभयरुपी एवं हल्का लाग्ने प्रस्तावनामा एउटा आर्थिक पदावलीलाई राख्नु अर्काे रहस्य र आश्चर्यको बिषय बनेको छ । त्यो हो समाजवाद । अब समाजवादलाई अस्वीकार गर्ने राजनीतिक शक्तिहरुले नेपालको राज्य सत्तामा उपस्थिति जनाउन पाउने कि नपाउने ? एकातर्फ राजनीतिक विचारलाई स्वतन्त्रता दिने प्रावधान राख्ने, अर्कोतर्फ समाजवाद एउटा सिद्धान्त विशेषलाई प्रस्तावनामै राख्ने अनौठो कार्य भएको छ मस्यौदा संविधानमा ।
यो समाजवाद नामको तुरुपले मुलुकमा कुन परिवर्तन लिएर आउला उप्रान्त ? जिज्ञाशाको विषय हो । यो स्वप्नकारको पहिलेदेखिको अडान छ शिक्षा, स्वस्थ्य र बृद्धावस्थाको पूरा सुरक्षा राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्छ ।
आजसम्म र पहिले पनि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले पटक-पटक शासन गरैकै हुन् र त्यो सासनले सामाजिक सुरक्षा दिइनुपर्ने क्षेत्रलाई अरु व्यापारीकरण पनि गरेकै हो । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र बृद्धावस्थाको सुरक्षाको प्रत्याभुति नदिने यी क्षेत्रलाई बिकाउ र बस्तुकरण गर्ने राज्य व्यवस्थाको पक्षपाती यी राजनीतिक दलहरुले भनेको समाजवाद के हो ? स्वप्नकारले बुझ्न सकेको छैन ।
कुनै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बिशेषमा वा चुनावी घोषणा पत्रमा राखिने भाषा र मर्म राखिएको मस्यौदा संविधान कतिको सतही छ भनिरहनु परेन ।
जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक पहिचानका अभियन्ताहरु र सांस्कृतिक मूलप्रवाहको पहिचानलाई संवैधानिक स्वरुप दिनुपर्छ भनी अडान राख्दै आएकाहरु एकठाउँ आउनै पर्छ
यो मस्यौदा संविधानको स्वरुप लिएर आउनका लागि बार्गेनिङ औजारका रुपमा पहिचानवादीहरुलाई प्रयोग गरियो । नेपालको मूल प्रवाह सांस्कृतिक राष्ट्रियतासँग जातीय र क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहिचानहरुलाई विरोधी बनाई लडाएर सांस्कृतिक अतिक्रमण पनि गरियो र अहिले तिनलाई मझधारमा पारेर अरु उग्ररुप ग्रहण गर्नु पर्ने बाध्यतामा धकेलियो ।
अर्कातर्फ यस्तो सम्भावित संबिधान ल्याएर राष्ट्रलाई गृहयुद्धमा फसाउने डिजाइन सफल पारिँदैछ । यसको अर्थ स्पष्ट छ, हिजो पहिचानको मुद्दालाई अति उक्साउने र यस्तो संविधानको स्वरुपलाई अगाडि ल्याउने एउटै सुत्राधारका दुई अनुहारहरु हुन् ।
जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक पहिचानका अभियन्ताहरु र सांस्कृतिक मूलप्रवाहको पहिचानलाई संवैधानिक स्वरुप दिनुपर्छ भनी अडान राख्दै आएकाहरु एकठाउँ आउनै पर्छ । जातीय र क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहिचानहरुलाई सांस्कृतिक अतिक्रमणकारीहरुको प्रभावबाट मुक्त गराउन लाग्नुपर्छ यसका अभियानताहरु ।
त्यसपछि नेपालको सांस्कृतिक मूलप्रवाहको आन्दोलनसँग जोडिनुपर्छ यो सांस्कृतिक राष्ट्रवादी नयाँ सूत्रले मात्र सबैको पहिचानको सुरक्षा गर्ने छ । अब नयाँ ध्रुवीकरणमा सांस्कृतिक राष्ट्रवादी आन्दोलन जरुरी छ, जसले बढीमा एक दशकभित्र अहिले लागु गर्ने भनिएको संविधान उखेल्न सकोस् । यदि यस्तो आन्दोलनले स्वरुप ग्रहण गर्न सकेन भने नेपालमा निरन्तर रुपमा बढदै गएको बिद्रोहको सामाजिकीकरणले राष्ट्र बिखण्डनमा पुग्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।
सांस्कृतिक राष्ट्रियताको मूल प्रवाहलाई सकी नसकी राप्रपा नेपालले अरु आंगिक मुद्दाहरुसँग एकीकृत गरेर उठाई आएको छ । जातीय र क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहिचानका मुद्दाहरुलाई केही मधेसवादी भनिएका र केही जातिवादी भनिएका दलहरुले पनि उठाई आएका छन् । तर, यिनीहरुको भावना कतै मिल्दोजुल्दो भई आए पनि उद्भव र उद्भवपछिको योजना अलग अलग थिए र छन् ।
अब नयाँ अध्यायमा मुलुक प्रवेश गरेको छ । यी दुवैले आफ्नो पहिलेको अवस्थावाट ठुलो परिवर्तनको वाटोमा हिँडी एकीकृत आन्दोलनमा पुग्नै पर्छ । यो ध्रुवीकरणको नयाँ सुत्रमा आउन सकिए मात्र राष्ट्र जोगिन सक्छ, नत्र संसारको सोह्रौं पुरानो राष्ट्रको अवसानको युग प्रारम्भ भएको छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/07/295027/#sthash.zZrDIzWp.dpuf
Posted by arun subedi at 5:48 AM No comments: